I-Commission Scolaire des Découvreurs - isikole soLimi se-BLI eCanada
Izinhlelo zePathwayIkhomishini Scolaire des Découvreurs
Indlela yakho eya eCanadaIkhomishini Scolaire des Découvreurs
I-Commission scolaire des Découvreurs yadalwa ngo-1986 kulandela ukuhlanganiswa kweKhomishini scolaire de Sainte-Foy kanye neKhomishini scolaire régionale de Tilly.
Ngonyaka wesikole ka-2018-2019, ihlinzeke ngezinsizakalo zemfundo kubafundi abacishe babe ngu-13,000 abafundi bezikole zamabanga aphansi nasesekondari kanye nokuqeqeshwa okulinganiselwa kwezi-4,595 kwabafundi bezemfundo yabadala.
Abafundi bayo bahlukaniswe izikole ezingama-22, kufaka phakathi izikole zamabanga aphansi eziyi-14, izikole ezi-3 zamabanga aphezulu, izikole ezi-1 zamabanga aphansi, izikhungo ezi-2 zokufundisa amakhono, 1 isikhungo semfundo yabantu abadala, 1 yunithi yokufundisa kanye nesikole esikhethekile sabafundi abakhubazekile.
Insimu yeCommission scolaire des Découvreurs ifaka ingxenye yesifunda seCapitale-Nationale, okuyiBorough of Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge kanye namadolobha aseSaint-Augustin-de-Desmaures naseL'Ancienne-Lorette ( cishe abantu abayi-135,000).
Ikhomishini Scolaire des DécouvreursOlunye ulwazi
Okusemthethweni French B2
IMISEBENZI YAMAKHAYA - KUSEKELA - AMAHORA angu-1800 IZinyanga eziyi-17
Kwimidwebo yekhompyutha, abafundi bafunda ukusebenzisa amajamo, imibala, izithombe, ukuthayipha nemifanekiso ukuze bakholise futhi bahambise umyalezo. Ukuze wenze lokhu, kufanele ufundise kahle amathuluzi afanele.
Iziqu zethu zizihlukanisa emakethe yemisebenzi ngolwazi lwazo oluhle lomfanekiso, ukucutshungulwa kwezithombe, ukuphrinta nokushicilela isikrini kanye nesoftware yokudala ikhasi lewebhu. Uhlelo olusha luzabavumela ukuthi bathuthukise amakhono athile kwimidiya yedijithali.
Lokhu kuqeqeshwa okwenziwe umuntu ngamunye kubeka umfundi enkabeni yokufunda kwakhe. Ngale ndlela, uthuthukisa ukuzimela namakhono wenhlangano.
UKUSEKELA KWAMAKHAYA - KUSEKELA - AMAHORA angu-1800 IZinyanga eziyi-17
Ingabe unentshisekelo kumakhompiyutha futhi ufuna ukuthola isisekelo esiqinile ku-software, i-Hardware kanye nenethiwekhi? Uhlelo lokuxhasa amakhompyutha luzohlangabezana nokulindelwe.
Iziqu zizokwazi ukuxazulula izinkinga kuzo zonke lezi zindawo zomsebenzi. Noma ngabe ufuna ukusebenza ngesandla endaweni yokusebenzela, ukusiza abasebenzisi noma ukugcina amanethiwekhi, uzothola kulokhu ukuqeqeshwa ithuba lokufeza amandla akho aphelele.
Njengoba ubuchwepheshe buvela ngokushesha, lokhu kuqeqeshwa kuzoba yisiqalo sokufunda okuqhubekayo.
UKWENZA IJEWELRY - KUSEKELA - AMAHORA angu-1800 IZinyanga eziyi-17
Jabulela ukuqeqeshwa okubhekiswe ngempela kuzidingo zemakethe yezabasebenzi. Imvelo yokufunda, ikhwalithi yemishini yezobuchwepheshe kanye nokuzivocavoca okwenziwe ngokoqobo kuzokuqinisekisa ukuthi uthuthukisa ulwazi lwakho esimweni sokukhiqiza esinengqondo nesishukumisayo.
UKWAKHIWA KWESIQINISEKISO - KUMASEKELA - AMAHORA angu-1800 IZinyanga ezi-17/28
Passionate mayelana nokwakha kanye nomsebenzi wekhompyutha? Yiba ngumsebenzi wobuciko bokwakha kule nkambo yokuqeqeshwa eyenzelwe ukwanelisa abaqashi abafuna kakhulu.
Uzofunda ukusebenzisa isoftware yokudweba ethuthukisiwe ukudala amapulani wokwakha, wokuhleleka nokwakha ngomongo ohlanganisa ukuqeqeshwa kothisha kanye nokuqeqeshwa emsebenzini.
Yiba ne-Official French B2
Ikhophi ye-CAQ yakho
Ikhophi yemvume yakho yokufunda